TV-bhokisi nVidia Shield TV Pro 2019: ongorora, zvakatemwa | TeraNews.net
Munyori Nikitin Eugenius Yakabudiswa pa 23.11.2019
Hondo mumusika weTV-yepamusoro bhokisi musika haisi kupera. Panguva mbiri mhando dzeChinese Beelink uye UGOOS dzairwira munhandare, kambani yeAmerica nVidia yakapa chisikwa chayo chakasarudzika. TV-bhokisi nVidia Shield TV Pro 2019, pamwe chete nekushanda kwekuona vhidhiyo yemhando mumhando yakakwana, yakagadzirirwa kugadzira kukwikwidza kwemitambo consoles.
Kutonhora chiteshi Technozon yakatumira vhidhiyo inoshamisa yekudzokorora. Izvo zvinokanganisa wekutanga kuziva, chipfupi kutarisisa kweiyo kifaa uye maitiro ekuedza (network, mitambo, vhidhiyo yezvinhu). Izvo zvese zvinongedzo zveTechozon chiteshi (kuongororwa nezvitoro) isu, semazuva ese, tinoburitsa pazasi peji.
TV-bhokisi nVidia Shield TV Pro 2019: yakatarwa
Kuita kuti zvive nyore kuti muverengi anzwisise kuti icho chigadzirwa chitsva chakasiyana sei kubva pamusoro zvigadziriso zveChinese, tichaita yekuenzanisa yekuenzanisa. Zvichida izvi zvichabatsira mutengi wenguva yemberi nekusarudzwa kweTV bhokisi pane zvavanoda.
Mamiriro nVidia Shield TV Pro 2019 Beelink GT-King PRO UGOOS AM6 Pro
Vhidhiyo adapta GeForce 6 ULP (GM20B), 256 CUDA Cores GPU Mali-G52 MP6 (850 MHz, 6.8 Gb / s) GPU Mali-G52 MP6 (850 MHz, 6.8 Gb / s)
ROM kuwedzera Ehe, USB Flash Hongu, makadhi ekurangarira kusvika ku32 GB Hongu, makadhi ekurangarira kusvika ku32 GB
uchishandisa maitiro Android 9.0 Android 9.0 Android 9.0
Kubatana kwemagetsi Hongu, RJ-45, 1Gbit / s Hongu, RJ-45, 1Gbit / s Hongu, 1 Gbps RJ-45 chiteshi (802.3IEEE 10 / 100 / 1000)
Wi-Fi 802.11 a / b / g / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz (2 × 2 MIMO) 802.11 a / b / g / n / ac: 2,4 + 5,8 GHz (MIMO 2T2R) 802.11 a / b / g / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz (2 × 2 MIMO)
MAKARALI USB Bluetooth 5.0 ine LE Technology Bluetooth 4.1 + EDR Bluetooth 5.0 ine LE Technology
Wi-Fi Signal Boost kwete kwete Hongu, 2 antennas na 5db
Interfaces HDMI, 2xUSB 3.0, LAN, DC HDMI, Audio Out (3.5mm), MIC, 4xUSB 3.0, SD (kusvika ku32 GB), LAN, RS232, DC AV-kunze, AUX-in, microSD, LAN, 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0, HDMI 2.0, SPDIF, DC / 12V
Makadhi Memory kwete Chero SD makadhi microSD 2.x / 3.x / 4.x, eMMC ver 5.0
4K tsigiro Hongu 4Kx2K @ 60FPS, HDR Hongu 4Kx2K @ 60FPS, HDR + Hongu 4Kx2K @ 60FPS, HDR
mutengo 240-250 $ 140-150 $ 140-150 $
TV set-yepamusoro bhokisi kana console?
Pakutanga, iyo tv-bhokisi nVidia Shield TV Pro 2019 yakaiswa pamutambo mutambo weiyo papuratifomu yeAroid. Zvese zvinhu zvinonongedzwa kuita kwakanyanya kuita mumitambo. Uye chinonakidza ndechekuti prefix haina zvachose kungogumira kune Android application. Iyo poindi yacho ndeyekuti bhokisi reTV rinogona kuvhura matoyi kubva kuNVidia Mitambo pane yakanyanya kuiswa. Hongu, izvo chaizvo izvo vatambi zvinoshandiswa kutamba pakombuta yemunhu kana laptop. Bubble inotaura nezve izvi zvakadzama mune yake kuongorora kweawa (vhidhiyo pamusoro).
Kana zviri zvekugona kweShield TV Pro kutamba vhidhiyo yezvinhu mu 4K fomati, heino kurongeka kwakazara. Iko kushayikwa kwakazara kwekutapira (kushandira kutonhora), tsigiro yemhando dzese dzemavhidhiyo macodecs, decoding yedzidzo ine rezinesi mune yakajairika. Uye boka rezvimwe zvigadziriso izvo zvinobatsira mushandisi mukushanda kwekoni. Chinhu chete chaunofanira kutarisa neicho mutengo webhokisi reTV. Kana mutengi asina kuronga "kushandisa" inotonhorera nVidia matoyi, asi zviroto zve omnivorous set-yepamusoro bhokisi re 4K TV, saka hapana chikonzero chekutenga Shield TV Pro.
Sniper Elite 5 Game System Zvinodiwa
Call of Duty: Project Aurora mu beta
Star Trek: Strange New Worlds Ongororo
Motorola Moto G Go yakanyanya bhajeti smartphone
Huawei Watch GT2 Pro ECG Edition yakadonha mumutengo
Imbwa murume kana kushandisa $15000
Xiaomi Mijia: shave yemagetsi kune vanhu vane mafoni
Mawaniro ebasa rinoenderana newe
Bitcoin kukosha kunodarika madhora zviuru mazana mapfumbamwe emamirioni
Cyberpunk 2077 naKeanu Reeves: kubudiswa kwemutambo 16 Kubvumbi 2020